Manova Ny Fahazaran-dratsin’ny Indostria Ny Mpanakanto Amin’ny Boky Mampihomehy Any Brezila · Global Voices teny Malagasy
Manova Ny Fahazaran-dratsin'ny Indostria Ny Mpanakanto Amin'ny Boky Mampihomehy Any Brezila
Voadika ny 14 Marsa 2013 21:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, polski, English
Rehefa avy nandalina tsara ny tontolon'ny hatsikana manerana an'i Amerika Latina tao amin'ny lahatsoratsika teo aloha isika, dia hiverina any Brezila hamantatra misimisy kokoa ny comicdom (tontolon'ny fampihomehezana) Breziliana, satria vao avy nankalaza ny andro nasionalin'ny Boky Mampihomehy (Dia do Quadrinho Nacional) [pt] izy tamin'ny 30 Janoary teo.
Nankalazain'ny fikambanana mpanao sariitatra São Paulo voalohany indrindra tamin'ny 1984 ny andro izay natao ho fahatsiarovana ny fotoana voalohany ny “As aventuras de Nhô Quim” [pt] (“Tantaran'i Atoa. Quim), izay heverina ho tantara hatsikan'i Brezila voalohany, nivoaka tamin'ny 1869.
Hanamarihana ny fialam-boly, dia andeha isika hijery ny fironana farany sy ny fanavaozana nitranga avy amin'ny fianakaviamben'ny boky fampihomehezana any Brezila amin'izao fotoana izao.
Tantara mampihomehy nosoratan'i Pablo Carranza. Mitantara ny lahatry ny mpanao sary iray ao amin'ny nofy ratsiny ny tantara. “(1) Ramose, mba afaka ataonao sary ve aho? (2) Tsy hiafara amin'ny sariitatra kilalaon'ny ankizy kely nataon'ny zazavavy kely antsoina hoe Evelyn akory ianao… Nofy ratsy fotsiny izy ity…”. Nampiasaina niaraka tamin'ny fahazoan-dalana.
Famoahana ny an'ny tenany ihany sy fikaroham-bola
Mananosarotra hoan'ny mpanakanto avy amin'ny faritra sasany ny mamoaka ny asany, satria saika mifatratra ao amin'ny faritr'i Rio de Janeiro sy Sao Paolo daholo ny tsenan'ny boky fampihomehezana. Na dia hita hoe tafajanona ao amin'ireo faritra metropolitana midadasika ireo ihany aza ny ankamaroany, amin'izao fotoana izao kosa dia misy safidy bebe kokoa mipetraka hoan'ireo mpanakanto, toa an'i Vitor Batista, hanatràrana mpankafy maro miaraka amin'ny sanganasany. Nanapa-kevitra i Batista, izay avy any Ceará faritra avaratra atsinanan'i fanjakana Breziliana, ny hamoaka ny asany eo amin'ny bilaoginy Território Marginal [pt], ary amin'ny alalan'io ihany koa no hivarotany ny bokiny.
“Ilay lehilahy marary” nataon'i Vitor Batista, nivoaka tao amin'ny Território Marginal eo ambany lisansa CC BY-NC-ND 2.5 BR. (1) Ny tsy fihariharin'ny famoretana misy eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana no tena olana lehibe indrindra eo amin'ny fiarahamonina. (2) Ooops. (3) Hita ve? Vao notazonina am-ponja mihitsy aho izao, ary nomelohina.
Niova be mihitsy ny famokarana sy ny famoahana ny boky mampihomehy tany Brezila tao anatin'ny taona maro. Araka ny nolazain'ny mpanoratra boky mampihomehy Bira ao amin'ny dinidinika nifanaovana taminy [pt,en] niaraka taminà bilaogy Poloney iray:
Efa zatra mividy Boky mampihomehy eny amin'ny fivarotana Gazety eny an-dalana isika. Amin'izao fotoana izao, eny no toerana farany hahitana ny Boky Mampihomehy, rehefa mitady azy ireny ianao. Mazava ho azy fa ho hitanao eny ny boky mampihomehy Marvel, DC, Disney sy MSP (ny hany mba Breziliana). Satria moa tian'ny mpanonta ny boky kokoa ny endrika boky na ny endrikin'ny bokin'ny tantaram-pitiavana, dia ny fivarotam-boky no toerana tsara indrindra ahitàna azy ireo. Fa nahita fipoahana govana ihany koa isika teo amin'ny famokarana boky mampihomehy (làlana hafa ihany koa) niaraka amin'ny fikambanan'ny mpankafy (fanzine), ny mahaleotena na koa ny ireo mpanonta madinika, hatramin'ny 2006. Kolotsaina tena manandanja nitranga tany Brezila tamin'ny taona 70 ny fikambananan'ny mpankafy, ary dia nipoitra indray izy amin'izao.
Fomba iray izay mety hisy fiantraikany amin'ny tontolon'ny boky mampihomehy, tsy eo an-toerana ihany, fa koa nasionaly, ny fanontana samirery ny bokin'ny tena, manandratra fahasamihafana ara-jeografika kokoa eo amin'ny tsenany izany.
Fa tsy mora foana nefa izany. Ao amin'ny dinidinika [pt] niaraka tamin'ny bilaogy Itiban Comic Shop, niresaka mikasika ny lafy tsara sy ratsin'ny famoahanao samirery ny asanao i José Aguiar, mpanakanto sy mpitahiry ny fifanarahana Gibicon eo amin'ny boky fampihomehezana [pt]:
Miaro ny mpanakanto mba tsy ho voapetrapetraka na koa ho eo ambany fifehezan'ny mpanonta izay tsy misokatra amin'ny safidy sasantsasany ny famoahan'ny tena ihany ny bokin'ny tena. Manolotra azy ireo fahalalahana tanteraka amin'ny famoronana izy ity (…) Fa ny hery sy ny fotoana lany ho amin'ireo asa fitsinjarana sy ny tamberina avy any amin'ny toeram-pivarotana azy no tena sarotra amin'ity dingana ity. Tsy voalamina izany ary tsy dia misy fanajana feno ho amin'ny mpanonta boky mahaleotena(…)
Voaporofo ho mahomby ny fikaroham-bola ho an'ireo andrana sasany, isan'izany ity fampielezan-kevitra avy amin'ny Quadrinhos Rasos ity, fiarahana mpanakanto roa izay nanamboatra hira malaza ho lasa tranga an-tsary namboarina, izay samihafa amin'ny efa mahazatra ankapobeny ny tonony.
Horonan-tsary mampihomehy nataon'i Quadrinhos Rasos, tetikasa izay maneho karazana dika hafan'ireo hira pop Breziliana. “(1) Alefa alefa alefa alefa (2) Fotoana, ry namana (3) manaova tsara toetra amiko (4) Mahatoky anao aho (5) mandritra ity alina ity (6) alefao etsy ambany fotsiny aho (7) amin'ny farany”. Nalaina tamin'ilay hira ” “Sobre o tempo” an'i Pato Fu. Navoaka teo ambany lisansa CC BY-NC-SA 3.0.
Ary mihamaro ihany koa ny mpanankanto no manomboka mampiasa ny fanangonana mpankafy ho lalana iray hafa amin'ny famantsiam-bola ho amin'ny tetikasany. Maneho ohatrana tetikasan'ny boky mampihomehy izay nanaraka ny fomba fiasa fanangonana mpankafy ity pejy [pt] tranokala Catarse mikasika ny fanangonana mpankafy ity, ny sasany amin'izy ireo moa efa nahomby sahady.
Mahasintona ny avy any ivelany ny boky mampihomehy Breziliana
Nilaza ny mpanoratra boky mampihomehy Timothy Callahan tao amin'ny pejy natokana ho an'ny Fakan-kevitra mikasika ny Boky Fampihomehezana tamin'ny taona 2010 fa tena saika ” nivoaka avy any Brezila” ny ankamaroan'ny fironan'ny boky fampihomehezana any Etazonia. Na farafaharatsiny hoe sary natao tany Brezila. Tena tahany ambony mihitsy raha oharina”. Hoatry ny hoe saika avy amin'ny mpamorona talenta iray ihany ny ankamaroan'ireo mpanakanton'ny boky mampihomehy Breziliana izay mahita fahombiazana ao amin'ny tsena Amerikana.
Hoy izy manoratra ao amin'ny pejin'ny “The Boys from Brazil”:
Hitako hoe tena mahagaga fotsiny hoe miankina amin'ny mpamorona talenta iray fotsiny any Brezila ny fironan'ny bokin'ny fampihomehezana. Ary hitako ihany koa hoe mahagaga fa avy any Brezila ihany koa ny mpanakanto tsara indrindra miasa amin'ny fampihomehezana amin'izao fotoana izao, eny fa na dia tsy voatery hoe misy ifandraisany aza ny teo aloha sy ny farany.
Noho izany. Brezila. Harena miafin'ny talenta? Tany lonaky ny mpanakanto amin'ny boky mampihomeny? Sa fanodinkodinana ny hevi-bahoaka? Ianao no afaka manapaka izany.
Fiovana lehibe hatramin'ny taonjato maro lasa izay, raha toa ka tsy dia nahazatra ny Breziliana ny fahalehibeazan'ny indostria maro ho amin'ny boky fampihomehezana.
Tsy natao ho an'ny ankizilahy ihany
Saika nibahan-toerana ny lehilahy hatramin'izay tamin'ny indostrian'ny boky fampihomehezana, ary maro ireo mpanoratra sy vondrom-panoratra tany Brezila no niezaka nanova izany. Ho an'ny mpanomboka, nanolotra fomba fijery hafa ny bilaogy toy ny Lady's Comics [pt] , miresaka mikasika ny “mpilalao vehivavy, ny mpanoratra ary ny mpanao sary”.
Manontany ny Mulheres nos Quadrinhos (Ny vehivavy ao amin'ny fampihomehezana) [pt], vondrona ao amin'ny Facebook: “iza no nilaza fa ny ankizilahy ihany no mahay ny zavatra rehetra mikasika ny fampihomehezana?”. Mamoafivoafy loharano maro samihafa, izay nosoratana niaraka tamina vehivavy ao an-tsaina, ity pejy misy mampihomehy ity.
Fanaovana an-tsary ny fandehanan'ny fotoanan'ny ulheres nos Quadrinhos [Ny vehivavy ao amin'ny Fampihomehezana]. (1) Mandeha tsikelikely amin'ny fiarovan-tenan'ny vehivavy. (2) makà toerana mora miala (3) asehoy hoe liana kokoa ianao hiditra amin'ny zavatra hafa – tiako ianao, te-hiaraka aminao aho mandrakizay ho eo anilanao dia hanan-janaka maro isika (4) jereo izy mitsoaka lavitra aminao entin'ny tahotra.
Natao hoan'ny olon-tokana na vondrona famokarana eo amin'ireo vehivavy izay ao amin'ny sehatry ny fanaovana sary ny tetikasa toy ny Inverna [pt]. Manandratra ny Defrosting Women [pt], fanoherana izay atao hamporisihana ny asan'ireo vehivavy amin'io sehatra io, izy ireo miaraka amin'ny fiaraha-miasan'ny gazety boky Kanadiana.
Izaho, ianao, izy ireo, isika… vondrona sy fiarahamiasa!
Efa manomboka mihamaro ny fifanarahana fiaraha-miasa. Mampivondrona hery amin'ireo mpamoaka boky, mpanao lahatsary, mpamokatra, ary ireo karazana famoronana izay tsy mahazatra fa ilaina miasa miaraka anefa ny mpanakanto, hanandratana ny famoronana vokatra tsy mahazatra ary mitondra amin'ny fahasamihafana maro eoamin'ny tsena, ary koa fanaovana ny tsenan'ny boky mampihomehy ho azo iainana kokoa.
Mbola olana foana ny lalan'ny fanaparitahana hoan'ny boky fanontana. Ary mora lavitra mihitsy ny mahatratra ny mpankafy maro sy eran-tany amin'ny aterineto. Vokany, nisafidy ny lalana niomerika ny mpanakanto toy an'i Pablo Mayer, Fernando Medeiros, sy Diogo César ary namoaka niaraka ny fampihomehezany teo amin'ny tranonkalany Pocotomics [pt], izay avaozina isan-kerinandro.
Ohatra iray hafa ny trano famoahana mahaleo tena Beleléu [pt]. Miorina any Rio de Janeiro, maneho fiarahamiasa amina mpanakanto maro samihafa ny trano famoahana iray, manolotra fanisan'andro vita tanana, antsoina hoe Pindura [pt]. Hanampiana ny famoahana, manolotra fanampiana amin'ny aterineto ihany koa izy ireo, eny fa na dia amin'ny teny Angilisy aza(Jereo Beleléu Magazine!).
Ny hoavin'ny famiphomehezana Breziliana
Nomarihina tamin'ny fankalazana maro ny Andro nasionalin'ny Boky Fampihomehezana tany Brezila, toy ity iray ity [pt] tany Fortaleza ary ity iray ity [pt] tany Salvador. Tonga ary dia lasa indray ny famokaran boky 2013. Inona no manaraka ho an'ny boky mampihomehy any Brezila?
Tao amin'ny lahatsoratra 2005, manontany tena mikasika ny hoavin'ny fampihomehezana Breziliana ny mpitoraka bilaogy Ubiratan Araújo:
“Mety hiankina amin'ny hoe, hamoaka any Etazonia isika, mpanakanto vahiny, na tsia, ny hoavin'ny Fampihomehezana any Brezila…”.
Mba mety hoe marina ve nefa izany? Tsy hahita valine eto ianao amin'ity lahatsoratra ity, satria tsotra fotsiny tsy misy raikipohy tokana hoan'ny fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny boky fampihomehezana Breziliana. Ny zavatra tokana azo lazaina dia raha mbola manohy manandrana koa ny mpanakanto Breziliana, dia hanolotra safidy maro eny amin'ny tsena ny hoavy ary hanolotra fomba hafa amin'ny famokarana boky fampihomehezana.
Nosoratana niaraka tamin'ny fiarahamiasan'i João Miguel Lima ity lahatsoratra ity.